फिचर समाचार | Naya Yougbodh National Daily | Page 486 Free songs
Home / फिचर समाचार (page 486)
कम्प्यूटर चलाउाँदै दृष्टिविहीन
August 1, 2016	0 183 Views
दशर थ घिमिर े दे उखुर ी, १६ साउन । डुरुवा गाविस वडा नं. ६ धम्कापुर निवासी सुस् िमता चौ धर ी दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । तर आइतवार आँखा नदे ख्ने सुस् िमता चौ धर ीले कम्प्यूटर मा ‘दुई महिने आधार भूत कम्प्यूटर तालिम सञ्चालन गर्न सहयो ग गर्ने जिल्ला विकास समिति दाङ र आयो जना गर्ने ने त्रहीन ...
मृतकका परिवार भन्छन्– हत्यारालाई कारवाही कहिले हुन्छ ?
July 31, 2016	0 121 Views
जनक ने पाली गो ल्टाकुर ी (दाङ), १५ साउन । गो ल्टाकुर ी–८ कौ वाघार ी हत्याकाण्डको १४ वर्ष पूर ा भएको छ । २०५९ साउन १६ गते घर बाट हलो जुवा काट्न भनी जंगल हिँडे का स् थानीय दलित युवाहरुलाई र ाजाको ट टावर को सुर क्षार्थ खटिएको तत्कालीन शाही से नाले सामूहिकरुपमा हत्या गर े को थियो  । हत्या भएको ...
अदालतले कैद सजाय तोकेका ८८ जना पक्राउ
July 30, 2016	0 160 Views
युगबोध समाचारदाता तुलसीपुर , १४ साउन । अदालतले दो षी ठहर गर े र कै द सजाय सुनाएका ८८ जना फर ार अभियुक्त पक्राउ पर े का छन् । एक वर्षको समयमा (आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा) र ाप्ती अञ्चल प्रहर ीले ती व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर े को हो  । र ाप्तीका विभिन्न जिल्लामा गर े र एक सय ...
बाढी पस्दा आठ घर भत्किए, पौने तीनसय घरमा असर
July 29, 2016	0 148 Views
निमुसंगम घर्ती घो र ाही, १३ साउन । दुई दिन पहिले र ाप्ती नदीमा आएको बाढी गाउँमा पस् दा दे उखुर ीमा आठ घर भत्किएका छन् । बे ला गाविस–२ कठबे रुवाका आठ घर मा बाढी पस् दा बस् नै नमिल्ने भएको प्रहर ीले जनाएको छ । ती आठ घर का ४६ जना नागरि कहरु अहिले आफन्तको ...
अलपत्र क्षेत्रीय विमानस्थलको योजना
July 28, 2016	0 158 Views
जनक ने पाली नार ायणपुर , १२ साउन । दाङको नार ायपुर मा निर्माण गर्ने भनिएको अन्तरर् ाष्ट्रिय क्षे त्रीय विमानस् थलको यो जना अलपत्र पर े को छ । पूर्वसंस् कृति, पर्यटन तथा नागरि क उड्डयनमन्त्री लो के न्द्रबहादुर विष्ट मगर मन्त्री हुँदा २०६८ माघ १० गते नार ायणपुर मा अन्तरर् ाष्ट्रिय क्षे त्रीय विमानस् थल निर्माणका लागि त्यस क्षे त्रको अध्ययन ...
अम्बिकेश्वरी कृषक समूहको सार्वजनिक सुनुवाइ
July 27, 2016	0 169 Views
गो विन्द खड्का घो र ाही, ११ साउन । लगानी विवर णसहित अम्बिके श्वर ी कृषक समूह घो र ाही–११ ले सो मवार दो स्रो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर े को छ । रि जमसँगको सहकार्यमा माहुर ीपालनमा समूहले गर े को लगानी सार्वजनिक गरि एको थियो  । अहिले सम्म १५ लाख ७८ हजार दश रुपै याँ खर्च भएको समूहका सदस् य सुशीला ...
कृत्रिम तालको अवधारणा सफलतातिर
July 26, 2016	0 160 Views
गो विन्द खड्का घो र ाही, १० साउन । घो र ाही नगर पालिकाले घो र ाही–३ को आर ो ग्य टो लमा तीन वर्षअघि ड्याम बाँध्यो  । यसरी पानी थुने र ताल बनाउन सकिन्छ भन्ने मा नगर पालिकालाई द्विविधा थियो  । त्यहाँ वर्षातसँगै पानी सङ्लन हुन थाल्यो र त्यसले नगर पालिकामा हर्ष बढायो  । पहिलो पाइला सफल भएर ...
१५ करोड बढीको लगानीमा खानेपानी आयोजना
July 25, 2016	0 137 Views
युगबो ध समाचार दाता सल्यान, ९ साउन । सल्यान जिल्लाको शारदा नगर पालिकामा सञ्चालित ते स्रो साना शहर ी खाने पानी आयो जनाको आधा भन्दा बढी काम पूर ा भएको छ । ने पाल सर कार , उपभो क्ता र नगर विकास को षको लगानीमा खलंगा शीतलपाटी साना शहर ी खाने पानी आयो जना सञ्चालनमा आएको हो  । पानीको ...
बडहरा पूर्णसरसफाइ नमूना गाउ बन्दै
July 24, 2016	0 144 Views
दशर थ घिमिर े गो वर डिहा, ८ साउन । घर घर मा पानीको धार ा, अाँगन सफा, शौ चालय पनि नियमित प्रयो ग, जुन घर मा पसे पनि सर सफाइको ज्ञान । गो वर डिहा गाविस वडा नं. २ बडहर ा गाउँमा पुग्ने जो को ही लाई त्यहाँको सर सफाइले लो भ्याउन सक्छ । बाटो को दुबै तर्फ सिमे न्टबाट बनाइएको रि ङमा ...
खानेपानी योजनाले झाडापखाला रोक्यो
July 22, 2016	0 166 Views
गो पाल शर्मा भट्टर ाई गो ल्टाकुर ी (दाङ) ६, साउन । दाङ गो ल्टाकुर ी गाविसको बाँकी बे टार पुर मा झाडापखाला र ो ग देखिएको छै न । विगतमा गर्मीयामसँगै गाउँमा झाडापखाला लाग्दा धे र ै बिर ामी पर्दै आएका थिए । यसै कार णले के हीले त ज्यानसमे त गुमाउनुपर े को थियो  । खो ला, खो ल्साको फो हो र पानी खाँदा गो ल्टाकुर ीमा झाडापखालाको ...
Page 486 of 561« First...460470480«484485486487488»490500510...Last »